जाडो मौसमसँगै कोरोना संक्रमण बढ्ने जोखिम छ, कसरी जोगिने त ?
कोभिड–१९ परीक्षणको लागि स्वाब निकालिँदै। तस्बिर– अनुज मानन्धर/शिक्षापत्र
काठमाडौं– कोरोना भाइरस संक्रमण घट्ने कुनै सुरसार छैन। जाडो मौसमसँगै संक्रमण झन् बढने खतरा चिकित्सक औल्याइरहेका छन्।
सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहान शहरमा पहिलोपटक देखिएको कोरोना भाइरसले मंगलबार बिहानसम्म १२ लाख ६२ हजार ५१ जना मानिसको ज्यान लिइसकेको छ। ५ करोड ८ लाख १ हजार ४ सय ७१ जना संक्रमित छन्।
आखिर संक्रमणको यो त्रासदी कहिलेसम्म ? विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार भाइरस संक्रमणको क्रम रोकिन अझै दुई वर्ष लाग्छ।
संगठनका प्रमुख डा. टेड्रोस अधोनोम घेब्रेयेससले सन् १९१८ मा महामारीका रूपमा फैलिएको स्पेनिस फ्लू सकिन दुई वर्ष लागेको बताउँदै कोरोना भाइरसको संक्रमण सकिन पनि दुई वर्ष लाग्ने दाबी गरेका हुन्।
गर्मी मौसममा महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अब जाडो मौसममा झन् बढने खतरा छ।
हिउँदमा विभिन्न किसिमका भाइरसको सक्रियता बढेजस्तै कोरोना भाइरसको पनि सक्रियता बढ्नसक्छ। हिउँदमा कोरोना भाइरस संक्रमणको क्षमता पनि बढी हुने चिकित्सक बताउँछन्।
चिसो मौसममा शरीरमा भाइरससँग लड्ने क्षमता कम हुने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनको भनाइ छ।
डा. पुनका अनुसार जाडोमा सूर्यको प्रकाश कम हुँदा शरीरमा भिटामिन डीको कमी हुन्छ। जसले गर्दा कोषहरूमा असर पर्छ। र शरीरमा प्रतिरोधी क्षमतामा पनि कमी हुन्छ। त्यो समयमा भाइरसले शरीरमा तुलनात्मक रूपमा बढी असर पार्छ।
‘यो भाइरस जाडो मौसमबाटै सुरु भएको थियो,’ डा. पुन भन्छन्, ‘जाडो मौसममा अझ बढी सक्रिय हुन्छ। यसैले जाडो महिनामा अझ बढी ख्याल गनुपर्छ।’
वरिष्ठ सरुवारोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी जाडो मौसममा कोरोना भाइरस बढी समय सक्षम रहने भएकाले जोखिमको सम्भावना बढी रहेको बताउँछन्। लक्षण देखिनासाथ पीसीआर परीक्षण गर्न र अनावश्यक र हानिकारक उपचार नगर्न उनको सुझाव छ।
‘सबै उमेर समूहका मानिस उत्तिकै खतरामा छन्। जाडो मौसममा भाइरस बढी समय बाँच्छ। त्यो समयमा निमोनिया, रूघाखोकीका बिरामी बढी हुन्छन्। त्यसैले कोरोना संक्रमित पनि ह्वात्तै बढ्नेछन्’, डा. सुवेदी भन्छन्।
चिकित्सक स्वास्थ्य गाइडलाइन तथा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर सुरक्षित हुन आग्रह गरिरहेका छन्। डा. सुवेदी र डा पुन दुबैको सल्लाह छ, जाडोमा कोरोना संक्रमणबाट बच्न सबैले सावधानी अपनाऔं।
जाडोमा जोगिने जुक्ति
–घरबाट बाहिर सार्वजनिक यातायातमा चढदा, भीडभाडमा जाँदा वा मानिसको समूह भएको कार्यस्थलमा जाँदा पञ्जा तथा फेस मास्क अनिवार्य लगाऔं।
–एकपटक प्रयोग गरिसकेको फेसमास्क वा पञ्जा पुनः दोहाेर्‍याएर प्रयोग नगरौं वा दैनिक सफा/परिवर्तन गरौं।
–घरभित्र कोठा, भान्छाकोठा वा बाथरुममा रहेका पुराना रुमाल सबै हटाइ नयाँ प्रयोग गरौं। घरका सबै सदस्यले छुट्टाछट्टै रुमाल प्रयोग गरौं तथा दैनिक रूपमा सफा राखौं।
–घरको झ्याल, ढोका खोल्दा वा बन्द गर्दा पञ्जाको प्रयोग गरौं वा खोल्दा वा बन्द गर्दा ह्यान्डिल छोएको हात साबुन पानीले धोऔं वा ह्याण्ड स्यानिटाइजरको प्रयोग गरौं।
–ल्यापटप, मोबाइल, टेलिफोन, कलम, खेलौना वा अन्य नियमित प्रयोग हुने वस्तु सामग्री प्रयोग पश्चात साबुन पानीले तत्काल हात धोऔं वा ह्याण्ड स्यानिटाइजरको प्रयोग गरौं।
–घरका सबै सदस्यले आ–आफ्नै टुथब्रस, थाली/प्लेट, चम्चा प्रयोग गरौं। नियमित प्रयोग हुने सामग्री सफा राखौं।
–सम्भव भएसम्म शाकाहारी भोजन ग्रहण गरौं। नसकिएमा माछा मासुजन्य बस्तु राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने गरौं।
–रोग नलागेको र घरमा पालिएको जीव जनावरबाहेक सकभर जिउँदो पशुपन्छी खरिद नगरौं। जीव जन्तु छोएपश्चात तत्काल साबुन पानीले हात धोऔं।
–घर वा कार्यस्थलका कोठाहरु गर्मीयाम भए हावा पास भएर सफा हावा बहने गरी खुला राखौं वा जाडोयाममा भए झ्याल ढोका बन्द गरेर कोठा न्यानौ राखौं। मानिसको आवतजावत भएमा समय समयमा झ्याल खुला राखौं।
–एक पटक प्रयोग भइसकेका भान्छाकोठाका सामग्री राम्रोसँग धोएर पुनः प्रयोग गरौं।
–खाना पकाउनुअघि, खाना खानुअघि, शौचालयमा गएपछि वा कुनै फोहर चीज छोएपछि साबुन पानीले राम्रोसँग हात धोऔं।
–कसैलाइ ज्वरोसहितको रुघाखोकी लागेको छ भने घरभन्दा बाहिर यात्रामा ननिस्कौं। घरमा छुट्टै आइसोलेसन कोठामा राखी उपचार गरौं। बिरामीको स्याहार सुसार गर्दा विशेष सतर्कता अपनाऔं। मास्क र ग्लभ्सको अनिवार्य प्रयोग गरौं।
–दैनिक कम्तिमा ५ लिटरसम्म पानी पिऔं। सकभर काँचो खानेकुराहरू नखाऔ। शरीर सफा राखौं र सफा कपडा मात्र प्रयोग गरौं। रुघाखोकी, ज्वरोसँगै बान्ता भएमा, पखाला लागेमा र श्वास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त नजिकको अस्पताल लगिहालौं।
काेराेना उपचारमा ५० प्रतिशत शय्या छुट्याउनुपर्ने
केही क्षेत्रमा कार्यरत बाहेककाे परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले नब्यहाेर्ने । दशैंको नवमी, दशमी र एकादशीबाहेक हरेक दिन पूर्ण क्षमतामा चलाउने र यी तीन दिन सबै प्रयोगशालाले परिक्षणको चाप अनुसार गर्ने ब्यवस्था मिलाउन निर्देशन ।